We Fight We Win. -- " More than Media ": အမေရိကန် ဖို့ဒ်ကားကုမ္ပဏီ အရောင်းဌာနဖွင့်ပြီ။
အမေရိကန် ဖို့ဒ်ကားကုမ္ပဏီ အရောင်းဌာနဖွင့်ပြီ။
-RFA & Bangkok Post-
Because of huge import taxes, US-made Ford Explorer starting from $105,000 (3.25 million baht).
ကမ္ဘာကျော် အမေရိကန် ဖို့ဒ် မော်တော်ကားကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးအရောင်းဌာနကို သောကြာနေ့ မနေ့က ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။
ဖို့ဒ်ကားကုမ္ပဏီက လက်ရှိရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းတွေ ကို မြန်မာပြည်သူအများစုအနေနဲ့ လက်လှမ်းမှီမှာ မဟုတ်ပေမယ့် အရောင်းပြခန်းကို လာရောက်ကြည့်ရှုသူ များပြားကြောင်းနဲ့ အနာဂတ်အလားအလာကောင်းကြောင်း ကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။